The undesired - Part 17 | Apg29
Zvino raiva zuva rokupedzisira mugiredhi rechitanhatu, uye pashure muzhizha Ndaitanga giredhi rechinomwe pana Astradskolan muna Ljungby. Ndakabva aifanira kupinda hombe kuzvidzora bhazi kubva Skeen dzandinozoverenga mangwanani ose aifanira kuchovha makiromita mashoma kuna. Ndaichovha ipapo mugwagwa tsvina shoma yedu kuti zvakazoita pasi Torpavägen uko Ndakatendeuka zvakanaka akananga Skeen. Pakutanga, zvakanga bedzi mugwagwa tsvina zvakare asi pashure rwakagadzirira payo. Ljungby riri maviri thousand kubva Skeen.
Asi ikozvino ndakanga ndakamira nezvimwe navo angu, tichimirira bhazi mutyairi, Hugo aizova wokupedzisira chaizvo nguva kuchovha kumba isu kubva Torpa chikoro. Ndinorangarira saka zvakanaka nguva ino. Zvino, mumwe chitsauko itsva rakanyorwa hwangu uye ndakanga pamwe kwete chokwadi turika zvaizoitika mune ramangwana zvino kwandiri.
Zuva kupenya uye aiva noushamwari uye vakasununguka. Vose vana vakapfeka nguo muzhizha uye akafara uye vaitarisira yakareba yezhizha zororo. Asi chokwadi, ndakafunga pamusoro chii chaizoitika chikoro chitsva, Ndaitanga pashure dzemazororo.
Dai upenyu hwangu zvino uye ramangwana richange zvishoma yakajeka? chaizvoizvo chii chakanga ramangwana chipi chichaitika kwandiri? Mumazana chikoro changu kubva giredhi rokutanga, ndakanga kutyisidzirwa uye kazhinji ndakanga kuedza ndizvidzivirire nokurwa. Asi ndakanga vagara underdog uye vakanga varasikirwa kurwa zvose. Ndakanga vakakundwa asingafari uye kuchengeteka muduku. Kwaisazova zvino zvakasiyana kana ndaienda kuchikoro chitsva uye boka idzva uye navo itsva?
Mudzidzisi wangu akanga zvino kwandiri apo pa chemabhazi ndakamira pamushana pachangu pamwe bhasikoro Racks kufungisisa apo vose nevamwe vana vaiva zvine uye kufara. Akamira shure kwangu uye akaisa maoko ake vakandipoteredza. Zvaiita sokuti aida kundinyaradza uye dai ini mhanza nekuti aiziva zvakaoma sei ndakanga kutyisidzirwa kuchikoro kusvikira zvevakomana. Haana kumbobvira aita ichi kwandiri pamberi. Haana hanya neni? Akanga kure kwandiri kuti kuenda? No kuchengetwa uye nokunzwisisa kwakadaro, haana kumbobvira ndanyeverwa pamberi. Iye vachisendama mukati uye akamutsvoda kumusoro kwangu, zvandakanga ndisinganzwisisi sei, asi sezvineiwo aida kundipa nyaradzo.
Zvino Hugo akauya ake bhazi kokupedzisira chikoro. Zvakanga inenge hafu sezvo guru sezvo guru orenji kuzvidzora mabhazi izvozvo gare gare kutora nesu Ljungby. Uyezve, tinoda kuwana kwetemu makadhi kuti kuenda, izvo isu ndisina kare. Ndakanzwa chaizvo mukuru uye akapotsa kukosha ndingadai kuwana kana bhazi kungobvumira.
Ndinofunga kuti vadzidzisi Torpa chikoro aita kuti ndaisagona kuramba navo angu ekare uye uende mukirasi chete navo. Naizvozvo, vakanga vasarudza neni kune imwe kirasi pandakatanga chesekondari kutiza vatambudzi izvi. Ipapo vakasarudza kuti ndaienda boka rinokosha. Pane boka apo ukaverenga pane nomumugwagwa kwaitora nguva aika. Ndave Yakataurwa munhu kuti vakaisa ini imomo kwete nokuti ndaida kuenda vari mukirasi zvakadaro, asi kuti kutiza vanodheerera. Zviripachena vaiziva kuchikoro dambudziko rangu pamwe vanodheerera, kunyange zvazvo zvakanga kumbobvira munhu akati izvi kwandiri.
Asi zvino kuti hazvina kubatsira chokuendesa mufashoni nemhomho nenjodzi chechinyorwa itsva umo havazivi ani imi muri. It vachange kutyisidzirwa. Zvichadaro, Chokwadi kutsanya vanodheerera itsva vanotora pamusoro basa nevamwe. Zvinotora mune dzimwe nzira iyi unhu hwavo. Zviri sezvazvaiva advertises: "! Uyai Vanodheerera ini ndiri unoda akuvara"
Summer zororo akaenda nokukurumidza rakasvika zuva apo Ndaitanga chesekondari, giredhi rechinomwe. Ndaiva nemakore 13 okuberekwa. Zvino pashure, ndinorangarira hapana zvakaitika kuti zhizha. Muzhizha Ndakashandisa kuenda swimming zvidzidzo hazvizivi dziva iri simba chirimwa pa Skeen. Ndakashandisa kuchovha ikoko, asi zvimwe handizivi chii chakaitika.
Asi kutanga kwezuva chikoro rokutanga, I saka zvakanaka kuyeuka. All kuti aizotanga mugiredhi rechinomwe vakaungana huru yaipiwa pachikoro. Ndakanga kumbova huru yepachikoro pamberi. Zvadaro chete zvaifadza.
Kirasi kubudikidza mukirasi, uye zvose vaienda mukirasi imwe neimwe kuverengwa nokuda wechikoro kubva yacho. Uye sezvo dzinotaurwa klassföreståndares mazita kukirasi imwe neimwe. Vadzidzisi vanotaurwa tingadai ipapo ipapo kuuya kukirasi mukamuri. The kirasi kuti ndaienda muzita 7 K uye mudzidzisi anonzi Ingrid Ljunggren.
Patinoita ikako munzira kuenda mukirasi kuburikidza refu mukoridho, nokuti raiva chikoro chesekondari guru nemazana nevadzidzi, akatendeuka pakarepo mudzidzisi wangu mutsva Ingrid Ljunggren kwandiri uye kutaura kwandiri. I kumupindura, asi handicharangariri chinyi, asi ndakanga zvose akashamiswa uye kushamisika zvishoma kuti iye chete akataura neni. Akati hapana vamwe mudzidzi upi huru kirasi vakauya naye, saka nei ini?
Pandakazopinda imomo refu chaizvo mukoridho kuenda mukirasi, paiva mubvunzo mupfungwa dzangu: Chii chaizoitika chikoro chitsva, uye ndakanga ikozvino akasununguka vanodheerera vamwe?
Wokupedzisira nyaya ndingadai kukurumidza kuwana mhinduro.
Serial Iri hwangu nyaya kubva pauduku zvichienda mberi. Ndinoti kupfeka uye zvakajeka. A yakawanda Handina kumbobvira ndakuudzai pamusoro adarika. Mamwe mazita ari munyaya dziri zvekunyepera.
Vecka 25, tisdag 18 juni 2019 kl. 05:48